Ukwakha i-Storybrand: Iinqwenelo ezi-7 zeThemba lakho eliShishini lakho lixhomekeke | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 21, 2018 NgoMgqibelo, Julayi 21, 2018 Douglas Karr
Phantse kwinyanga ephelileyo, kuye kwafuneka ukuba ndithathe inxaxheba kwintlanganiso yokucinga yomthengi. Kwakumnandi, ukusebenza nokubonisana okwaziwayo ngokuphuhlisa iimephu zeendlela zeenkampani zobuchwephesha. Njengoko iimephu zendlela zaziphuhliswa, ndachukumiseka ziindlela ezizodwa ezahlukileyo ezafika nazo iqela. Nangona kunjalo, bendizimisele ukugcina iqela lijolise kwintengiso ekujoliswe kuyo.
Ubuchule sisicwangciso esiliqili kumashishini amaninzi namhlanje, kodwa ayinakuba yindleko yomthengi. Iinkampani ezimangalisayo ezinezisombululo ze-ingenius zisilele kule minyaka idlulileyo kuba beze kwintengiso kwangoko, okanye bondla umnqweno ongekabikho. Zombini ziyakwazi ukupela intshabalalo- ibango yinto ebalulekileyo kuyo yonke imveliso okanye inkonzo enempumelelo.
Xa ndandithunyelwa ikopi ye Ukwakha iBali leBali, NguDonald Miller, ngokunyanisekileyo ndandingonwabanga ukuyifunda ngoko yayihlala kwishelufa yam yeencwadi kude kube kutshanje. Ndicinga ukuba izakuba sesinye isityholo Ukuxoxa ngamabali kwaye ingayiguqula njani inkampani yakho… kodwa ayisiyiyo. Ngapha koko, incwadi ivula ngo “Le asiyoncwadi yokubalisa ibali lenkampani yakho.” Wowu!
Andifuni ukuyeka yonke incwadi, kukufundwa okukhawulezayo kunye nokufundisayo endikucebisa kakhulu. Nangona kunjalo, kukho uluhlu olunye olubalulekileyo endifuna ukwabelana ngalo-ukukhetha ifayile ye- umnqweno ifanelekile ekusindeni kwegama lakho.
Amathemba asixhenxe okunqwenela ukusinda kwegama lakho kuxhomekeke:
Ukugcina izibonelelo zemali - Ngaba uza kugcina imali yomthengi wakho?
Ukugcina ixesha -Izinto zakho okanye iinkonzo ziya kunika abathengi bakho ixesha elingakumbi lokusebenza kwizinto ezibaluleke ngakumbi?
Ukwakha iinethiwekhi zentlalo - Ngaba iimveliso zakho okanye iinkonzo ziyawukhulisa umnqweno wabathengi bakho wokudityaniswa?
Ukufumana inqanaba Ngaba uyayithengisa imveliso okanye inkonzo enceda umthengi wakho ukuba afezekise amandla, iwonga kunye nophuculo?
Ukuqokelela izixhobo -Ukunikezela ngemveliso eyandisiweyo, ingeniso, okanye ukunciphisa inkunkuma kubonelela ngamashishini ukuze aphumelele.
Umnqweno ongaphakathi wokupha -Bonke abantu banomdla ngaphakathi kubo wokuba nesisa.
Umnqweno wentsingiselo Ithuba labathengi bakho lokuthatha inxaxheba kwinto enkulu kunabo.
Njengoko umbhali uDonald Miller esitsho:
Injongo yokuphawula igama lethu kukuba wonke umntu onokuba nomthengi uyazi ngqo apho sifuna ukubasa khona.
Yeyiphi iminqweno ongena kuyo ngegama lakho?
Malunga nokwakha iBali leBali
Inkqubo yeBaliBrand sisisombululo esiqinisekisiweyo kumzabalazo weenkokheli zeshishini abajongana nazo xa bethetha ngamashishini abo. Le ndlela yotshintsho yokunxibelelana nabathengi ibonelela abafundi ngeyona nto iphambili kukhuphiswano, ityhila imfihlo yokunceda abathengi babo baqonde izibonelelo ezinyanzelayo zokusebenzisa iimveliso zabo, izimvo zabo, okanye iinkonzo.
Ukwakha iBrandBrand yenza oku ngokufundisa abafundi amabali asixhenxe kwindalo iphela bonke abantu abaphendula kuwo; esona sizathu abathengi basithenga; indlela yokwenza lula umyalezo wophawu ukuze abantu bawuqonde; nendlela yokwenza owona myalezo usebenza ngokukuko kwiiwebhusayithi, iincwadana kunye nemidiya yoluntu.
Nokuba ungumlawuli wentengiso kwinkampani yezigidi zeedola, ungumnini weshishini elincinci, osopolitiki obalekela isikhundla, okanye imvumi ephambili yeqela lomculo werock Ukwakha iBrandBrand iya kuguqula ngonaphakade indlela othetha ngayo ukuba ungubani, wenza ntoni, kunye nexabiso elikhethekileyo ozisa lona kubathengi bakho.
Ukubhengezwa: Ndililungu leAmazon kwaye ndisebenzisa amakhonkco ukuthenga le ncwadi kwesi sithuba.
tags: uhloboUkufaka uphawuukwakha ibali lebaliibali lomthengiumnqwenoU-donald millerUkunika amandla ukuthengisawebali